Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 17
Nahoana no indraindray no nilaza fa i Jesosy dia iray amin'ireo mpamonjy ny olombelona ary ireo olon'ny antitra ihany koa dia nanana ny mpamonjy azy ireo, fa tsy nilaza hoe Izy no Mpamonjy izao tontolo izao, araka izay tazonin'ny Kristianisma Anarana?
Ny fanambarana dia noho ny antony maromaro. Misy ny manao an'io fanambarana io satria naheno ny hafa izany; ny sasany, izay mahalala tsara ny tantaran'ny taloha, satria ny tantaran'ny olona taloha dia mirakitra ny fisian'ny mpamonjy maro. Ny mpamonjy ny olona samy hafa dia samy hafa arakaraka ny filàn'ny olona itiavany azy ary ny zavatra manokana izay hamonjena azy ireo. Tamin'izany no nisehoan'ny mpamonjy iray hanafaka ny vahoaka amin'ny areti-mandringana na mosary, na avy amin'ny fanafihana fahavalo na bibidia. Ilay mpamonjy iray hafa dia nanehoana ny hanafaka ny olona izay nivoahany tamim-pahasiahana hampianatra azy ireo fiteny, zava-kanto ary siansa ilaina amin'ny sivilizasiona, na hanazava ny sainy sy ny fahatakaran'izy ireo. Na iza na iza no namaky ny rafi-pivavahana ara-pivavahana an'izao tontolo izao dia ho hita mazava fa nisy mpamono olona niseho taonjato maro na an'arivony taona talohan'ny daty nahaterahan'i Jesosy.
Raha lazaina fa mpamonjy an'izao tontolo izao i Jesosy amin'ny maha-Kristiana azy rehetra, ny fanambarana toy izany dia ho fisehoan'ny tsy fahalalana sy ny fiavonavonan'ny Fivavahana Lazaina fa Kristiana rehetra, saingy soa ihany fa ny Fivavahana Lazaina fa Kristiana dia tsy toy izany. Tao anatin'ny taona faramparany indrindra, ny tontolo tandrefana dia nanjary nifankahalala bebe kokoa tamin'ny tantaran'ny firenen-kafa, ary ny fahatsapana fahatsapana sy firahalahiana tsara kokoa no aseho amin'ireo firazanana hafa sy ny finoany. Ny tontolo tandrefana dia nianatra ny hanome lanja ny trano fitehirizam-pahefana ao anaty haren'ny literatiora nataon'ny olona fahiny. Ny toe-tsaina tranainy vitsy olom-boafidin'Andriamanitra na nifidy ny ho voavonjy amin'ny isa maro tsy tambo isaina dia nanjavona ary eo amin'ny toerany dia tonga fankatoavana ny fahamarinana sy ny zon'ny rehetra.
Azonao ambara aminay ve raha misy olona mankalaza ny nahaterahan'ny mpamonjy azy ireo na ny manodidina ny roapolo amby roapolo amin'ny volana Desambra (amin'ny fotoana ilazana ny masoandro hiditra amin'ny famantarana Capricorn?
Ny andro faha-XNUMX ny volana Desambra dia fotoam-pifaliana lehibe tany Ejipta, ary nisy fankalazana iray natao ho fankalazana ny tsingerintaona nahaterahan'i Horus. Amin'ireo fombafomba sy fombafomba voatondro ao amin'ny boky masin'i Sina, arahana akaiky ny fetin'ny fivavahana taloha. Nandritra ny herinandro farany tamin'ny volana desambra, tamin'ny fotoan'ny solstice ririnina, mihidy ny fivarotana sy ny kianja. Ny fankalazana ara-pivavahana dia ankalazaina ary atao hoe fetin'ny Fankasitrahana ho an'i Tie Tien. Ny Persian Mithras dia nantsoina hoe mpanelanelana na mpamonjy. Nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany izy tamin'ny volana Desambra dimy amby roapolo tao anatin'ny fifaliana lehibe. Fantatra fa tamin'io fotoana io dia nijanona ny masoandro ary avy eo miverina mianavaratra taorian'ny fivahinianany tany atsimo, ary voalaza fa efa-polo andro no natokana ho an'ny fisaorana sy sorona. Nankalaza ny andro fahadimy amby roapolo tamin'ny volana Desambra ny Romana tamin'ny fetibe lehibe ho fankalazana an'i Bacchus, satria tamin'ny fotoana nanombohan'ny masoandro niverina avy tao amin'ny solstice ririnina. Tamin'ny andro taty aoriana, rehefa nampiditra ny fombafomba Persiana maro tany Roma, dia io andro io ihany no nanamasinana izany ho fetin'ny fankalazana an'i Mithras, ny fanahin'ny masoandro. Ny Hindoa dia manana fety enina mandimby. Tamin'ny taona dimy amby roapolo tamin'ny volana Desambra dia nanamboara firavaka sy tranom-borona ny olona ary nanao fanomezana ho an'ny namana sy havany. Ka dia ho hita eo amin`izao fotoana izao ny vahoaka efa ela no nivavaka toy izay faly. Tsy tamin'ny lozam-pifamoivoizana na tamin'ny kisendrasendra fotsiny izany tamin'ny fotoanan'ny ririnina. Azo ekena kokoa ny mihevitra fa, ao anatin'ireo fifanandrifian-javatra hita teo aloha rehetra, dia misy fahamarinana marim-pototra momba ny dikany lalina.
Voalaza fa ny fahaterahan'i Kristy dia ny fahaterahana ara-panahy. Raha izany no izy, nahoana no lazaina fa nankalaza ny vatan'ny fety noho ny fisakafoanana sy ny fisotroana ny Krismasy, amin'ny lafiny ara-nofo, izay mifanohitra amin'ny fomba fisainantsika ara-panahy?
Miverina amin'ny Kristiana tamin'ny taonjato voalohany ny antony ho an'io daty io. Tamin'ny ezaka ataon'izy ireo hampifanaraka ny fotopampianarany amin'ny zavatra inoan'ireo mpanompo sampy sy ny fireneny dia nampidiriny tao anaty kalandriany manokana ireo fety. Namaly tanjona indroa ity valiny ity: nameno ny fomban'ireo olona ireo ary nitarika azy ireo hihevitra fa tokony ho masina amin'ny finoana vaovao ny fotoana. Saingy, tamin'ny fananganana ny andro firavoravoana sy ny fety, ny fanahy izay nanosika ireo dia very ary tsy misy afa-tsy ny sary masiaka indrindra izay voatahiry amin'ny lehilahy avaratra, ny Druid ary ny Romanina. Biby goavambe no nomena alalana ary nahazo alalana tanteraka; nanjaka tokoa ny halatra sy ny mamo. Miaraka amin'ny olona tany am-boalohany, ny anton'ny fifalian'izy ireo dia noho ny faneken'izy ireo ny nandehanan'ny masoandro tamin'ny teboka farany ambany indrindra tamin'ny fiharihany ary hatramin'ny fahadimy amby roapolo tamin'ny volana Desambra dia nanomboka ny dia, izay hiteraka ny fiverenan'ny lohataona ary hamonjy azy ireo. avy amin'ny hatsiaka sy ny lao ririnina. Saika ny hitantsika rehetra amin'ny vanim-potoanan'ny Krismasy no niandohany tamin'ny taloha.
In 'Neny miaraka amin'ny namana,' ny Vol. 4, pejy 189, voalaza fa ny Krismasy dia midika fa 'ny fahaterahan'ny masoandro tsy hita maso, ny Fitsipika Kristy,' izay mitohy dia tokony ho teraka ao anaty olombelona '. Raha misy izany dia manaraka ve ny fahaterahan'i Jesosy dia tamin'ny andro fahadimy amby roapolo tamin'ny volana Desambra?
Tsia, tsy manaraka izany. Raha ny tena izy dia voalaza ao amin'ny "Moments with Friend" etsy ambony, fa i Jesosy dia tsy vatana ara-batana. Izy io dia vatana miavaka amin'ny ara-batana — na dia teraka ara-batana sy ara-batana aza izy io. Ny fomba fiterahana dia misy ary misy fanavahana eo amin'i Jesosy sy Kristy. Jesosy dia vatana izay miantoka ny tsy fahafatesana. Raha ny marina, ny tsy fahafatesana dia tsy azon'ny olona ambara-pahafatin'i Jesosy na ny vatana tsy mety maty. Io vatany tsy mety maty io, na Jesosy, na amin'ny anarana hoe iza no nahafantarana hatramin'ny taloha, izay mpamonjy ny olombelona fa tsy hatramin'ny fahaterahany dia voavonjy tamin'ny fahafatesana izy. Io lalàna io dia mitazona tsara toa izao. Ny olona iray izay maty dia tsy tonga tsy mety maty, fa raha tsy izany dia tsy mety maty izy. Fa ny olona lasa tsy mety maty dia tsy mety maty, fa raha tsy izany dia tsy maty izy. Noho izany ny olona dia tokony hahatratra ny tsy fahafatesana alohan'ny hahafatesany, na raha tsy izany dia miteraka indray ary manohy mamorona indray mandra-pahafatiny amin'ny fahafatesana amin'ny maha Jesosy tsy maty azy. Fa Kristy tsy vatana, tahaka an'i Jesosy. Ho antsika sy ho antsika, Kristy dia fitsipika fa tsy olona na vatana. Izany no nilazana fa tsy maintsy ateraka i Kristy. Midika izany, ho an'ireo izay tsy mety maty, dia ny fahazavan-tsaina dia manazava ny fisian'ny fitsipik'i Kristy ary izy ireo dia afaka mahazo ny fahamarinan'ny zavatra.
Raha tsy niaina sy nampianatra toa izay tokony hataony i Jesosy na i Kristy, ahoana no fomba naharesy ny fahadisoana toy izany nandritry ny taonjato maro sy naharitra androany?
Ny hadisoana sy ny tsy fahalalàna dia mandresy mandra-pisolo'ny fahalalana azy; manam-pahalalana, manjavona ny tsy fahalalana. Tsy misy efitrano ho an'ny roa tonta. Raha tsy eo ny fahalalana, tokony ho fahalalana ara-nofo na ara-panahy, dia tokony hanaiky ireo zava-misy misy azy isika. Maniry ny zava-misy tsy hitovy dia tsy hanova azy ireo jot. Tsy misy ny zava-misy ao amin'ny tantara momba ny nahaterahan'i Jesosy na Kristy. Ny teny hoe Jesosy sy Kristy dia niaina taonjato talohan'ny nahaterahana dia malaza. Tsy misy firaketana an'izany olona izany isika amin'ny fotoana voalaza fa nahaterahany. Izay efa niaina — ary niteraka korontana sy fankasitrahana ho toy ny toetra manan-danja iray - dia tokony ho norombahan'ireo mpahay tantara tamin'izany fotoana izany. Heroda, dia voalaza fa nahatonga ny zazalahy maro novonoina mba hahazoana antoka fa tsy velona ilay zaza. I Pilato dia voalaza fa nanasazy an'i Jesosy, ary i Jesosy dia voalaza fa nitsangana rehefa avy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana. Tsy nisy tamin'ireo zava-nitranga mahavariana rehetra ireo noraketin'ireo mpahay tantara tamin'izany. Ny firaketana anananay dia ny ao anaty Filazantsara. Manoloana ireo zava-misy ireo dia tsy afaka milaza isika fa teraka ny fahaterena malaza. Ny tsara indrindra azo atao dia ny manome azy toerana iray amin'ireo angano sy angano eto amin'izao tontolo izao. Ny hoe manohy ny fahadisoantsika momba ny fahaterahana sy ny fahafatesan'i Jesosy dia tsy hafahafa. Fomba fanao sy fomba mahazatra ao amintsika izany. Ny lesoka dia raha misy ny fahadisoana, dia miaraka amin'ireto raim-piangonana voalohany izay nanao ny fangatahana sy nametraka ny dogma ny nahaterahan'i Jesosy.
Midika ve ianao fa ny tantaran'ny Kristianisma dia tsy inona fa fable, fa angano ny fiainan'i Kristy, ary saika nandritra ny 2,000 taona izao tontolo izao no nino angano?
Tsy efa nino ny Kristianisma tao anatin'ny efa ho 2,000 taona izao tontolo izao. Tsy matoky ny Kristianisma ankehitriny izao tontolo izao. Ny kristiana tenany ihany aza dia tsy mino firy ny fampianaran’i Jesosy mba hiaina ampahany zato amin’izy ireo. Ny kristiana, ary koa izao tontolo izao dia manohitra ny fampianaran'i Jesosy eo amin'ny fiainany sy ny asany. Tsy misy fampianarana iray momba an'i Jesosy izay arahin'ny Kristiana tanteraka. Ny fahasamihafan'ny zava-misy sy ny angano, dia niresaka izahay fa tsy misy zava-misy momba ny fahaterahana ara-tantara sy ny fiainan'i Jesosy. Ny angano sy angano no nataon'ny kristiana maro ho fototry ny fivavahana hafa firenena, fa ny finoana Kristiana dia amin'ny kilasy iray ihany. Raha ny zava-misy dia tsy manana fototra firy ny fivavahana kristiana fa tsy manana ny maro amin'ireo fivavahana lehibe eto amin'izao tontolo izao. Tsy midika akory izany hoe diso ny Kristianisma, ary tsy diso ny fivavahana rehetra. Misy fomba fiteny tranainy fa ao anatin'ny angano rehetra dia misy lozisialy. Angano iray dia fitantarana misy fahamarinana lalina. Marina izany ny Kristianisma. Ny fisian'ny olona maro izay nandray soa tamin'ny voalohany ary tamin'ny fotoantsika tamin'ny finoana ny fiainana sy ny hery famonjena an'i Jesosy dia tsy maintsy manana hery miafina; Io no tanjany. Ny fisehoan'ny mpampianatra na fampianarana lehibe dia mifanaraka amin'ny lalàna iray, ny lalànan'ny tsingerin-taona na vanim-potoana. Ny fotoana nahaterahan'i Jesosy dia ilay tsingerim-potoana na vanimpotoana hanambarana sy hamoronana fahamarinana vaovao nambara. Mino izahay fa tamin'io fotoana io dia nisy teo amin'ny olona iray izay tonga amin'ny tsy fahafatesana, ny fahaterahan'ny vatana Jesosy efa nantsoina, fa rehefa nahatratra izany dia natolony ny fampianarana momba ny tsy fahafatesana ho an'izay heveriny ho azony sy takarina. ary nitangorona nanodidina azy ny isan'ireo nantsoina hoe mpianany. Tsy misy tantara momba izany satria ny tsy nahalalany ny olona tsy nahalala ny zava-miafina momba ny fiainana tsy mety maty. Mijanona sy mampianatra ny mpianany mandritra ny fotoana kelikely, dia nandao izy, ary ny fampianarany dia nampahafantarin'ny mpianany. Ny anton'ny fikirizan'ny finoana an'i Kristy sy ny fampianarany dia ny hoe ao anatin'ny olona no resy lahatra amin'ny mety hisian'ny tsy fahafatesany. Io finoana tsy takatry ny saina io no ahitantsika ireo fampianaran'ny fiangonana nivadika tamin'ny endriny ankehitriny.